2,000 dhajiis oo aan hada bilaabayno! | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 5, 2009 Axad, Nofeembar, 3, 2013 Douglas Karr
Markii iigu dambaysay ee aan u dabaaldego koritaanka balooggan waxay ahayd markii aan dhaafay 1,000 post ku calaamadee Nofeembar 2007. Halkan waxaan joognaa 2,000 oo qoraal oo balooggu waa caafimaad qabaa, ma ahan maalqabeen 🙂 iyo xigmad leh. Waxaa la joogaa waqtigii la bilaabi lahaa darajo weyn oo waan weynaanayaa.
Imaatinka ugu dhakhsaha badan waa magac-bixin yar oo goobta ah… maya che cheesy-ka Windows 2000 dib u habeyntiisu ma ahan hordhac! Qaarkiin waa xusuusnaan karaa markaan ka wareejiyay cinwaanka dknewmedia.com una bedelay martech.zone… taasi waxay ahayd wajigii koowaad ee lagu kala saarayo mareegta iyo astaanteyda gaarka ah. Midkaa wuu dhaawacmay! Waxaan lumiyay darajadaydii ugu sarreysay 1,000 ee Technorati, waxaan lumiyay TON gadaal gadaal ah (inkasta oo aan 301'd ka yahay goobta), oo lumiyey xoogaa awood ah. Waxaan ku hagaajiyay darajooyinka ereyada gaarka ah ee gaarka ah waxaan jeclaan lahaa inaan bartilmaameedsado inkasta oo aan jeclahay "Teknolojiyada Suuqgeynta".
Isbeddel aad u ballaaran ayaa ah diiwaangelinta xirfadlayaal suuq-geyn oo dheeri ah, mid walbana leh khibrad u gaar ah:
Jon Arnold - khabiir adeegsiga iyo qaabeynta webka.
Chris Bross - khabiir lacag-gujin-gujin ah.
Ball Lorraine - khabiir suuq geynta iyo xiriirka dadweynaha.
Chris Lucas - khabiir ku takhasusay warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta suuqgeynta.
Nila Nealy - khabiir ku takhasusay calaamadeynta iyo istiraatiijiyadda.
James Paden - khabiir ku takhasusay cilmiga ganacsiga iyo is-beddelashada.
Adam Yar - khabiir ku takhasusay suuqgeynta moobiilka.
Bryan Povlinski - Dhawaan wuxuu ka qalin jabiyay Suuqgeynta iyo Orr Fellow… Bryan wuxuu caawin doonaa baloogga wuxuuna siin doonaa aragtidiisa kaqalinjabiyaha suuq geyn da 'yar.
Waxaan wadahadal la yeeshay qaar ka mid ah xirfadlayaasha suuqgeynta gobolka waxaana laga yaabaa inaan bilaabo qaar ka mid ah buugaagta shaqada oo imanaya, buugaagta qaar, iyo xitaa xitaa shir.
Waxaa jira boggag suuqgeyn ah oo qaali ah oo halkaa ku yaal oo diiradda saaraya wararka, warbixinnadii ugu dambeeyay ee falanqeeyeyaasha iyo teknoolojiyada - laakiin waxaan rajeynayaa inaan buuxiyo farqiga anigoo ah baloog aad ka heli karto talobixin khibrad leh oo aad ku qaban karto shaqadaada maalin kasta. Inbadan ayaa imanaya!
Kani waa baab cusub wuxuuna xirayaa cutubka blogkayga. Weli waxaan ahaan doonaa madaxa cunto karinta iyo dhalada dhaqe inta aan sii wadno, laakiin waa socotaa our blog waxaa lagu siin doonaa aragtiyo kala duwan iyo fursado badan oo aad kula tashan karto khubaradayada maalinba maalinta ka dambaysa.
Inbadan ayaa soo socota!
Tags: blog tiknoolajiyadda suuqgeynta
Aug 6, 2009 at 12: 54 AM
Hambalyo Doug !! Sii wad! Waad ku mahadsan tahay dhammaan aragtidaada qiimaha badan!
Waxa ugufiican shirkadaada cusub!
Aug 6, 2009 at 2: 29 AM
Aug 6, 2009 at 1: 43 AM
Aad u xiiso badan runtii. Waad ku faraxsan tahay inaad mashquul tahay! Waxaan rumeysanahay inay tani tahay fikrad weyn oo aan la sugi karin inaan arko waxa ku dhacaya dhammaan qorayaasha cusub. Waa inuu noqdaa qarax waxyaabaha ku jira! Miyaad dib u bilaabi doontaa baloog kuu gaar ah mar labaad? (maahan inaad waqti uhesho inaad wax qorto ama wax uun)
Kama tagayo, Jason! Weli waan sii qorayaa - waxaan rajeynayaa hal mar maalintii ama sidaas. Waxaan kaliya ku dari doonnaa codad badan oo suuq geyn ah iskudhafka oo aan kor ugu qaadno darajo!
Kubbadda loo yaqaan 'lorraine Ball'
Agoosto 6, 2009 saacaddu markay ahayd 12:45 PM
Waxaan kuugu hanbalyaynayaa guusha. Waxaan ku faraxsanahay ka mid noqoshada 1,000 ee soo socota
Agoosto 6, 2009 saacaddu markay ahayd 9:10 PM
Waxaan kuugu hambalyaynayaa garaacista 2,000!
Layli xiiso leh ayaa noqon doona inaad eegto boggagaagii hore ee 2,000 oo aad hesho waxyaabaha aad geliso inta ugu badan. Ma ahan in 2,000 ay aad u badan yihiin, laakiin in qaarkood ay ka caan baxeen oo ka macno badan yihiin kuwa kale.
Akhriste joogta ah, tusaale ahaan, waan ogahay inaan si joogto ah uga boodo qoraalada "Links-ka Taariikhdan" laakiin marwalba waan ku raaxeystaa "xanta". Waxaa laga yaabaa in is-falanqeyntani ay kaa caawin karto inaad sii wado hagaajinta balooggaaga dhammaan akhristayaashaada.
Mar labaad, hambalyo!